Guddiga Doorashada Galmudug Oo Shaaciyay Xiliga Ay Dhacayso Doorashada Laba Kursi -
HomeWararkaGuddiga Doorashada Galmudug Oo Shaaciyay Xiliga Ay Dhacayso Doorashada Laba Kursi
Waxaa beri oo arbaco ah lagu wadaa in magaalada Dhuusomareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ka bilaabato doorashada Xildhibaanada golaha Shacabka ee laga soo dooranayo Galmudug.
Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa shaaciyay in beri Dhuusomareeb lagu dooranayo labada kursi ee kala ah HOP26 oo ay ku fadhido hada Ikraan Aadan Absuge & HOP104 uu ku fadhiyo Mahad Cabdalla Cawad .
Labadan Kursi ee doorashadooda ka dhaceyso magaalada Dhuusomareeb ayaa ah mid aan xiiso iyo xamaasad toona laheyn, waxaana doorashadan kusoo baxaya oo loo xiray Senator Yuusuf Geelle Ugaas iyo Mahad Cabdalla Cawad.
Guddiga doorashada ayaana ku wargaliyay ergada dooraneysa labadan kursi in xaadir ku noqdaan hoolka doorashada ka dhaceyso sideeda subaxnimo si doorashada u bilaabato Sagaalka subaxnimo.
Doorashada Xildhibaanada golaha shacabka oo horey loo saadaalinayay in ay noqoto mid xamaasad leh ayaa hada u muuqata mid rajo beel ah oo dad gaar ah oo la rabo kaliya loo xirayo taas oo meesha ka saareysa in dalka ka dhacdo doorasho hufan.
Guddiga doorashooyinka Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa shaaciyay doorashada labo kursi oo ka mid ah Golaha shacabka, kuwaasi dhawaan lagu dooran doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi.
Guddiga ayaa sheegay in labo kursi oo kala ah; HOP 026 iyo HOP 104 la dooran doono, 24ka bishaan.